Semalt: 10 Zvizivikanwe Zvikwangwani Zvekudhika KweWebhu Kuti Ubudise Online Data
purojekiti yekutsvakurudza nokukurumidza, idzi web scraping zvishandiso zvinobatsira kubvisa zvinyorwa zvepaIndaneti pasina dambudziko. Izvo zviri nyore kushandisa uye kuuya nezvikwangwani zviri nani uye zvivako kupfuura mamwe mapurogiramu akafanana. Zvishandiso izvi zvakagadzirirwa kubvisa ruzivo rwakakosha pakarepo, kuchengetedza nguva yakawanda nesimba revashandisi - text logo maker for mobile.
Ngatitaurei pano kuti ndikuudzei kuti dzimwe dzezvirongwa izvi hazvibhadharwi apo vamwe vanouya muzvinyorwa zviviri uye zvisingabhadharwi. Iwe unofanirwa kushandisa purogiramu yepurogiramu kana nguva yekuedzwa yapera:
Import.io inozivikanwa nekucheka kwayo uye teknolojia yepamusoro uye yakakura purogiramu yevashanduri vewebhu uye vanyori scrapers. Inogona kubatsira kuwana deta kubva pamamwe mapeji ewebhu uye kutumira kune maSVV mumaminitsi. Mazana kuzviuru zvemawebhusayithi anogona kutorwa asina kunyora chero code, uye Import.io ichavaka 1000 APIs kwauri maererano nezvinodiwa.
Dexi.io, inonziwo CloudScrape, ichakubatsira kuwana dhidhiro yakarurama uye yakarongeka mumasekondi mashoma. Iwe haufaniri kutora purogiramu iyi seDexi.io is browser-based editor uye web scraper kuti inongoratidzira nzvimbo dzako asiwo inokambaira kana kuti inonyatsotora. Inounganidza uye inochengetedza data zvose paBhokisi.net neGoogle Drive uye inotumira kune JSON ne CSV.
Webhouse..Io ndeimwe shanduro-based web scraper uye yekushandisa iyo inokamba uye inotsvaga mawebhusayithi ako ane imwe API. Inogona kubvisa dimiro mumitauro inopfuura 240 uye inotsigira mafomu akaita se RSS, XML, uye JSON.
Scrapinghub is cloud-based web scraping program uye extractor. Inoshandisa imwe, yakasimba proxy rotator, inozivikanwa seCrawlera. Bhuku rayo rinoputika richakubatsira kurongedza nzvimbo yako pakutsvaga injini zvakanaka uye ichaita kuti isasununguka kubva kune zvinokuvadza kana zvakaipa. Purogiramu yepurogiramu ichakutengesa madhora makumi maviri nemashanu pamwedzi uye iyo yekusununguka kwayo inouya nenhamba shoma yezvinhu.
Visual Scraper iyi yakazara uye ine kodzero yehuwandu hwemashoko ewebhu iyo inogona kushandura mawebhusayithi akawanda uye mablogiti kune vashandisi, uye mhinduro yacho inotorwa mukati memaminitsi mashoma. Iwe unogona kuwedzerwa kuwana deta yako nenzira yeXML, JSON, CSV, uye SQL.
6. Kukanganisa Hub:
Kubudisa Hub inobatsira uye inoshamisa yeFoodfox yakawedzera iyo inowedzera webhutsva yedu nekuda kwezvinhu zvinoshamisa uye zvisingaenzaniswi zvekubudiswa kwemashoko. Iwe unogona kutarisa nemazita emuwebhu uye unogona kuwana data inoda mune zvakawanda mafomu.
Scraper inonyatsozivikanwa nekuda kwekushandiswa kwayo kwevashandisi uye kutengeserana kwaunoita data yako kuGoogle spreadsheets. Iyo chirongwa chepachena chinogona kushandiswa zvose nekutangira uye nyanzvi. Iwe unongoda kukopa iyo data kubhokisi rekudhikidzira uye rega Scraper iyo nzira yako.
Ichi ndicho chakasimba uye chinogadziriswa web web scraper uye chikwata chedata chinogona kuverenga kunaka kwe data yako zvichienderana nezvaunoda. Inoshanda nekukurumidza uye inotora data yaidikanwa mumasekondi mashanu kusvika gumi. Iko zvino iri kushandiswa nemakambani akaita sePayPal, MailChimp, nevamwe.
NeSpinn3r, zviri nyore kutora data yose kubva kune masayenzi, nzvimbo dzezvemagariro evanhu, RSS feeds, ATOM dzinopa uye zvinyorwa zvemashoko. Inokupa zvitsva zvaunoda mumafaira eJSON.